Maxaad u soo degtaa oo ku degtaa France? Awoodda shaqada ee Faransiiska
Posted by Tranquillus | Juun 5, 2018 | Si aad u degto oo uga shaqeyso Faransiiska
Dal kasta wuxuu leeyahay shuruuc shaqo oo u gaar ah, dhammaantoodna waxay leeyihiin faa'iidadooda iyo faa'iidooyinkooda iyadoo ku xiran xaaladda. Waa maxay hantida Faransiiska? Maxay xiiso u qabtaa inay ka shaqeyso Faransiiska?
Faransiiska waa dal Yurub ah oo shaqadu xiiso leedahay, waxaana jira fursado badan. Marka laga reebo riyo ah in uu abuuro maskaxda dad badan muwaadiniin ajnabi ahWaxay ka sarreysaa waddanka dhaqaale ahaan xooggan oo u muuqda inuu u fidiyo ilaalin muhiim ah shaqaalaha.
Dalal soo jiidasho leh oo loogu talagalay ardayda qalin jabisa
Faransiiska ayaa caan ku ah shirkadaha iyo machadyada adduunka oo dhan. Ardayda qalin-jabinta ee ajnabiga ah ayaa si gaar ah loogu siiyay degaanka. Aqoontooda, xirfadahooda iyo aragtiyahooda waa qiyamyo xoogan oo xoog leh, dawlada iyo loo shaqeeyayaashu si fiican ayey uga warqabaan. Taasi waa sababta ay u fududahay in la yimaado si ay u degaan France oo ka shaqee.
Shan iyo shan saacadood iyo SMIC
Faransiiska, shaqaaluhu waxay heli karaan heshiiskii 30 saacadood toddobaadkii. Tani waxay suurtogal ka dhigeysaa in ay nolol ku noolaanayso iyada oo aan la ururin shaqooyin badan, iyo in la xaqiijiyo dakhliga ugu hooseeya dhammaadka bil kasta. Waxaa intaa dheer, waa suurtogal in la isku daro shaqooyin badan oo kuwa doonaya in ay si buuxda u gutaan noloshooda xirfaddooda. Dhammaan waddamada ma bixiyaan amniga shaqadan.
Dhanka kale, Faransiiska ayaa soo bandhigay mushaharka ugu yar, oo la yiraahdo SMIC. Tani waa sicirka ugu yar saacaddii. Iyadoo aan loo eegin jagada la qabtay, saacadaha shaqada 151, shaqaaluhu waa la hubiyaa helitaanka mushaarka u dhigma. Loo shaqeeyayaasha looma oggola inay bixiyaan dakhliga ka hooseeya sicirka saacaddan.
Fasaxyada la bixiyay
Bil kasta wuxuu shaqeeyaa xaqa uu u leeyahay laba iyo badh maalmaha fasaxa ee fasaxa, taas oo u dhiganta shan toddobaad sanadkii. Waa xaq loo leeyahay oo dhammaan shaqaalaha ayaa ka faa'iideysanaya. Dhinaca kale, shaqaale shaqaynaya soddon sagaal saacadood toddobaadkii ayaa sidoo kale ku urursan RTTs. Sidaa darteed, waxay helayaan wadar ahaan toban toddobaad oo fasax lacag ah sanad walba, taas oo ah mid aad u qiime badan.
Dadka saxiixay heshiis shaqo oo aan mudo cayiman lahayn ayaa la ilaalinayaa. Dhab ahaantii, way adag tahay in loo-shaqeeyayaashu yareeyaan shaqaale heshiisyada joogtada ah. Faransiiska, sharciga shaqaaluhu wuxuu ilaaliyaa shaqaalaha. Intaa waxaa dheer, haddii ay dhacdo in shaqada laga eryo, shaqaaluhu waxay helayaan gargaarka shaqo la'aanta ugu yaraan afar bilood, mararka qaarkoodna saddex sano ka dib taariikhda ka-noqoshada. Waxay ku xiran tahay muddada shaqada ee hore. Hase yeeshee, waxay bixisaa difaac waxayna bixisaa wakhti raaxo ah si ay shaqo uga hesho Faransiiska.
Dhaqdhaqaaqa dhaqaalaha Faransiiska
Faransiisku waa waddan dhaqaale ahaan adag oo haysta meel ka sii horraysa dhaqaalaha adduunka. Waddanku waa mid aad u soo jiidasho leh indhaha maalgashadayaasha aan ka labalabeynin inay ku kalsoonaadaan aqoonta Faransiiska. Waxay sidaas ku gaadhaysaa 6% ganacsiga adduunka iyo 5% GDP-da adduunka.
Miisaan heer caalami ah, waddanku waa kan ugu sarreeya warshadaha raaxada, iyo kan labaad ee dukaamada iyo beeraha. Marka la eego waxsoosaarka, France ayaa ku jirta kaalinta saddexaad adduunka. Sidaa daraadeed dalka ayaa si aad u fiican loo soo saaraa sida bulshada oo ah warshado casri ah. 39 Shirkadaha Faransiiska waxay ka mid yihiin shirkadaha 500 ee adduunka ugu weyn.
READ Tababbarka Xirfadeed ee Xirfad La'aanta
Saamaynta Faransiis-yaqaan sida
" laga sameeyay Faransiiska Ma tahay dammaanad qaad tayo leh oo lagu qiimeeyo qiimaheeda dhabta ah ee adduunka oo dhan. Farsamayaqaannada ka shaqeeya Faransiiska waa dad damiir badan oo had iyo jeer bixiya wax soo saar iyo adeegyo tayo sare leh. Wadar ahaan, waxaa jira 920 ganacsi gacmeed. Ka shaqeynta Faransiiska ayaa markaa kuu oggolaaneysa inaad waxbarto oo aad adeegsato farsamooyin shaqo oo heer sare ah oo laga aqoonsan yahay adduunka oo dhan.
Faransiiska waa dal ay shirkadaha waaweyni ku kalsoon yihiin kalsoonida ay u hayaan alaabadooda. Xirfadaha waxaa guud ahaan la horumariyaa, waddamada shisheeye waa kuwa hiwaayad u ah alaabta maxaliga ah. Ka faa'iideysiga Faransiis-ogaalku wuxuu u ogolaanayaa muwaadiniin ajnabi ah in ay helaan khibrad
Tayada hay'adaha waxbarashada
Maaha wax aan caadi ahayn in la arko muwaadiniin ajnabi ah oo wax ka baranaya Faransiiska iyagoo rajeynaya helitaanka shaqo abaalmarin ah. Runtii, hay'adaha tacliinta sare ee Faransiisku waa tayo sare. Waxay badanaa u suurtogeliyaan inay shaqo helaan qaybta la rabo dhamaadka koorsada. Intaa waxaa dheer, waxaa dhacaya in dadka dhalashadoodu ay yimaadaan si ay u degaan Faransiiska oo ay halkaas uga shaqeeyaan Carruurtooda helitaanka mudnaanta ee machadyada dugsiyada iyo jaamacadaha. Marka lagu daro helitaanka qaab ammaan ah, waxay siiyaan fursad weyn oo ay carruurtooda u helaan si ay u helaan shaqo ay doortaan.
Faransiiska ayaa ka mid ah dalalka ugu sareeya tayada nolosha. Raaxada iyo fursaddan si aad ugu noolaato si fudud ayaa soo jiita muwaadiniin ajnabi ah Ku noolaanshaha Faransiiska wuxuu ku siinayaa mid ka mid ah nidaamyada caafimaadka kuwa ugu fiican adduunka. WHO ayaa markii ugu horreysay ku guuleysatay Faransiiska waqtiyo badan. Ardayda ajnabigaa waxay sidoo kale ka faa'iideystaan ​​ilaalinta bulshada ee Faransiiska.
Intaa waxaa dheer, Faransiiska wuxuu leeyahay mid ka mid ah rajooyinka nolosha ee ugu dheer dunida. Tani waxay badanaa sabab u tahay nidaamka caafimaadka iyo tayada daryeelka la bixiyo. Dad badan oo ajnabi ah ayaa doorta inay yimaadaan si ay u degaan France si looga faa'iideysto tayada nolosha.
Ugu dambeyntii, qiimaha alaabada iyo adeegyada Faransiisku waa mid dhexdhexaad ah marka loo eego wadamo kale oo badan oo adduunka ah.
Faransiiska waxay leedahay dhaqamo aad u qanacsan oo soo jiidanaya farxad aduunka oo dhan. Sidaa darteed, waxay dhacdaa in muwaadiniinta ajnabigaa ay yimaadaan oo ay ka shaqeeyaan Faransiiska si ay naftooda ugu gooyaan gaar ahaan dalka, barashada luuqada iyo helitaanka deegaanno cusub oo shaqo. Caalamka, Faransiiska wuxuu ku raaxeystaa sumcad aad u wanaagsan noloshiisa.
Muwaadiniinta ajnabigaa waxay guud ahaan doortaan Faransiisku saameyntooda, awooddeeda dhaqaale iyo ilaalinta shaqaalaha. Soddon iyo shan saacadood iyo fasaxyo la bixiyo ayaa ah mudnaanta shaqaale Faransiis ahi ay heleen. Sidaa daraadeed, wadamadu dhammaantood ma siiyaan shaqaalaha. Muwaadiniinta ajnabigaa waxay guud ahaan u yimaadaan tayada nolosha iyo amniga shaqada marka ay u soo guuraan Faransiiska.
Waa maxay sababta ay u shaqeyneyso Faransiiska? May 14th, 2020Tranquillus
horeSidee udheer ujeeda shaqada?
socdaSidee loo abaabulaa goobta shaqada?